Jidadka Weyn ee Dutchtown • Dhisidda Dhul Dutchtown oo Qof walba u Wanaagsan
Ujeeddada Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa in kor loo qaado bulsho kobcaysa iyo barwaaqo la wadaago iyadoo la fududaynayo horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta fursadda xaafadda Dutchtown. Hadafkan, waxaan hiigsaneynaa inaan soo jiidanno lahaanshaha kala duwan, kor u qaadno meelaha, meelaha, iyo wejiyada, iyo kordhinta deggenaanshaha.
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa 501 (c) (3) ururka horumarinta bulshada ee aan macaash doonka ahayn.
Ku deeqidaada wuxuu caawiyaa Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown si kor loogu qaado bulsho kobcaysa iyo barwaaqo la wadaago iyadoo la fududaynayo horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta fursadda xaafadda Dutchtown.
Waddooyinka Waaweyn ee St. Louis
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown ayaa dhowaan iskaashi la yeeshay Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri waayo, Barnaamijka tijaabada ee UrbanMain, kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee Missouri. UrbanMain waa hindise lagu hormarinayo tamarta cusub ee Downtown Dutchtown iyo in la abuuro qaab loogu talagalay dadaallada hagaajinta mustaqbalka ee xaafadda oo dhan. Barnaamijku wuxuu isu beddelay inuu noqdo Waddooyinka Waaweyn ee St. Louis, iyo xaafadaha kale sida Laclede's Landing ayaa iyagana ka qaybgalaya.
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay siiyaan qiimo ganacsi bulshada reer Dutchtown. Waxaan u fududeyneynaa hab -nololeedka hal -abuurka ganacsiga maxalliga ah oo leh mabaadi'da naqshadaynta caqliga leh, ka -qaybgalka bulshada, horumarinta kheyraadka, iyo dhiirrigelinta iyada oo loo marayo sheeko -sheeg iyo warbaahin gaar ah. Habkayagu wuxuu kobciyaa jawi ganacsi oo caafimaad qaba kaas oo ujeedadiisu tahay soo jiidashada lahaanshaha kala duwan, kor u qaadida meelaha, meelaha, iyo wejiyada, iyo kordhinta deganaanshaha. Ganacsiga iyo bulshadu way isku xidhan yihiin, waxaanan abuurnaa isku xidhka lagama maarmaanka ah. Si taas loo gaaro, Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown iyo DutchtownSTL ayaa soo koraya ilaha ganacsiyada Dutchtown si looga caawiyo inay ku guuleystaan ​​xaafadeena.
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa urur ay bulshadu wadato, oo uu hoggaamiyo a guddiga ee dadka degan Dutchtown iyo milkiileyaasha ganacsiga. Guddiga waxaa hagaya Guddiyada Dutchtown oo ka kooban degganeyaasha iyo daneeyayaasha kale ee xoogga saara shan meelood oo muhiim ah: Naqshadeyn, Muhiimad Dhaqaale, Horumarinta, iyo Abaabulka. Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waxay u shaqeeyaan sidii qof walba loogu abuuri lahaa Dutchtown firfircoon oo kobcaya.
Iyada oo ay jiraan dhacdooyin noocan oo kale ah Habeennada Filimka xagaaga, iyo dadaallada sida kuweenna xannibo barnaamijka abaabulka iyo lacag ururin si dib loogu howlgeliyo Beerta Marquette, waxaan higsaneynaa inaan dhisno beel ka xoog badan deriskeena. Waxaan bixinaa news iyo Khayraadka dadka degan iyada oo loo marayo DutchtownSTL, waxaanan si joogto ah ulashaqeynaa ururada kale ee deriska sida kuwa CID -da Dutchtown iyo Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown.
Ka warran DT2?
Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown waa magaca cusub ee DT2 · Downtown Dutchtown. Isbeddelka magacu wuxuu calaamad u yahay dadaalladeenna si aan u ballaarinno diiradeena ka baxsan kaliya Aagga Downtown Dutchtown oo u dhow Meramec iyo Virginia. In kasta oo Downtown Dutchtown ay tahay aag muhiim u ah dib -u -nooleynta xaafaddeena, waxaan aqoonsannahay in baahida dadka deggan iyo meheradaha Virginia, South Grand, iyo dariiq kasta oo ku yaal Dutchtown ay muhiim u yihiin. Waddo kasta waa Waddo -weyne marka ay timaaddo dhisidda Dutchtown xooggan oo loogu talagalay dhammaan deriskeenna.
Dhacdooyinka Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown ee soo socda Dhacdooyin badan at dutchtownstl.org/calendar
Habeenka Filimka Dutchtown: Interrupers
Dhacdo on Meey 28th @ 7:00 pm
info More on Habeenka Filimka Dutchtown: Interrupers
Dhacdo on Juun 9th @ 6:00 pm
info More on Shirka Gudiga dallacaada ee Dutchtown
Dhacdo on Juun 14th @ 6:00 pm
info More on Shirka Gudiga Muhiimka Dhaqaalaha ee Dutchtown
Dhacdo on Juun 16th @ 6:00 pm
Eeg dhammaan dhacdooyinka Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown
Wararka Dutchtown Main Streets News Ka hel cusboonaysiinta Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown at Dutchtownstl.org/wararka
Akhriso inta kale "Ku taageer Dutchtown maalinta Sii STL"
Akhriso inta ka hartay “Dalbo Deeqaha Xooggan ee Magaalada MMSC”
Akhriso inta ka hartay "Magaalo Dutch ah oo Adag oo Faafa iyo Beyond"
Ka raadi Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown
Wax badan oo ku saabsan Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown